I-AnTuTu ivavanya iRedmi Qaphela i-8 Pro kwaye iyibonise njengombala ophakathi ophakathi | I-Androidsis
I-AnTuTu ivavanya iRedmi Qaphela i-8 Pro kwaye iyibonise njengoluhlu oluphakathi kakhulu olunamandla
Njenge usuku lokuqalisa Redmi Qaphela 8Kukho idatha ethe kratya esiyifumanayo kwiimpawu zayo kunye nokubalulwa kobuchwephesha, kunye nokusebenza kunye nokufota okunokubakho kwezi modeli zimbini ziya kuyenza.
Ukongeza ulwazi olutsha kuyo yonke into ebesiyityhila kwezi ntsuku, I-AnTuTu yeyona protagonist ngoku kwaye isibonisa amandla ayakuboniswa yimodeli yePro. Kwiqonga lakhe lokuvavanya udlulile ukurekhoda amanqaku akhe kumacandelo ahlukeneyo ahlala ehlolwa ngamanqaku okulinganisa, kwaye sibonisa indlela aqhube kakuhle ngayo.
Kuninzi okulindelweyo Redmi Qaphela 8, kodwa ngaphezulu kweRedmi Qaphela i-8 Pro, esengqiqweni kuba yeyona nto iphambili eyokuqala. Ngaphandle koko, kunokwenzeka ukuba idibanise okufanayo icandelo lokufota kunomntakwabo omncinci; Oko kukuthi, iya kuthwala izivamvo ezifanayo zekhamera, nangona kunokwenzeka ukuba, ngaphandle kweyona iphambili (esele iqinisekisiwe ukuba yi-64 MP), ezinye zibhetele kwaye zinezisombululo eziphezulu.
Inqaku leRedmi 8 Pro kwi-AnTuTu
Kodwa kulungile, ugxile kwiskoop ngoku, Imodeli yePro ifumene amanqaku okugqibela angama-281,033 kuvavanyo, njengoko kunokubonwa kwisikrini esingentla. Eli nani liphezulu linokubangelwa yiNkqubo-kwi-Chip entsha IHelio G90T Ukusuka kwi-Mediatek, i-chipset engundoqo yesibhozo enokufikelela kubuninzi bewotshi ye-2.05 GHz enkosi kwii-Cortex-A76 cores zayo kunye ne-2.0 GHz kwii-cores zayo ezintandathu zeCortex-A55, kunye ne-quad-core Mali-G76 GPU 800 MHz .
Ulwazi lwe-RAM kunye ne-ROM yoluhlu lweRedmi Qaphela 8 luye lwakhanya
Ukuphonononga iimpawu zale SoC kancinci, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba isekwe kuyilo lwe-nm ye-FinFET ye-12 nm. Ukongeza, ixhasa i-21: 9 yemilinganiselo yokubonisa umlinganiso, inqanaba lokuhlaziya isikrini ukuya kuthi ga kwi-90 Hz, umgangatho we-HDR10, ukuya kuthi ga kwi-10 GB ye-LPDDR4X RAM kunye ne-UFS 2.1 yokugcina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-AnTuTu ivavanya iRedmi Qaphela i-8 Pro kwaye iyibonise njengoluhlu oluphakathi kakhulu olunamandla
U-Oppo une-smartphone entsha ezandleni zakhe, kwaye oku sele kudlulile kwi-Geekbench
Isamsung ipapasha i-desktop yedesktop yedesktop ukuba isetyenziswe kunye neGalaxy Note 10